Imizamo yoMkhandlu iZululand yokutakula intsha engasebenzi – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Imizamo yoMkhandlu iZululand yokutakula intsha engasebenzi
UMnu uVusi Dlamini wasOlundi noMeya uButhelezi
UKUNTULEKA kwemisebenzi ikakhulukazi entsheni ngenye yezingqinamba ezinkulu ezibhekene neNingizimu Afrika.
Ucwaningo lwakamuva leStatistics SA, luveza ukuthi kubantu abayishumi, bane kuphela abasebenzayo. Noma lezi zingqinamba zikhona kepha uMasipala wesiFunda iZululand ubuyise ithemba entsheni ehleli emakhaya.
Lo Mkhandlu uvulele intsha amathuba emisebenzi ngaphansi kohlelo i-Extended Public Works Programme (EPWP). Lolu wuhlelo loMkhandlu kodwa oluphethwe ezingeni lukazwelonke lokutakula imindeni ehlwempu ngenhloso yokuxosha ikati eziko.
Bangama-240 abazohlomula kula mathuba omsebenzi abathathwe ngokwemikhandlu emihlanu engaphansi kwesiFunda iZululand. OPongolo kuqashwe abangama-50, eDumbe bangama-40, kwaNongoma bangama-60, eBaqulusini bangama-40 bese kuthi Olundi kuqashwe abangama-50.
Ngokusho kweMeya uMfundisi uThulasizwe Buthelezi enye yezingqinamba ezibhekene nalo Masipala ukushoda kwentsha eneziqu namakhono abalulekile.
Lo msebenzi abaqashelwe wona uzobathatha izinyanga ezili-12 bese bededela abanye ukuze bekwazi nabo ukuhlomula. Bazoholelwa imali eyi-R2 640 ngenyanga. Kuzothi uma sebeqedile ukusebenza ngokuphela konyaka bese benikezwa izitifiketi ezibanika amathuba angcono okuqashwa ngezinye izinkampani.
“Sihambe bonke oMasipala ngaphansi kwesifunda iZululand ngesiqubulo esithi SETHEMBE. Singene kulo Mkhandlu sibeke izinto ezintathu eqhulwini okuwukukhuculula sivimbe inkohlakalo, ukwakha ingqalasizinda namathuba emisebenzi. Sifisa bonke abaqashiwe beziphathe kahle kulo msebenzi ngoba uzobavulela amanye amathuba njengoba izinkampani ezizoqashwa uMkhandlu ukwenza eminye imisebenzi sizoqasha bona kuqala,” kuchaza iMeya.
Njengoba lesi sifunda sisabhekene nengwadla yokushoda kwamanzi abaqashiwe bazoqeqeshelwa ukusebenzela ezindaweni ezihlanza amanzi, ukulungiswa kwamapayipi amadala nokunye okuphathelene namanzi.
Omunye wabaqashiwe uNks uLindiwe Masondo wakwaCeza, kuWadi 3 uthe,”Ngiyajabula kakhulu ngokuthola leli thuba lomsebenzi. Ngithole ucingo kuKhansela ngokwazi isimo sasekhaya esingesihle neze. Ngibe sengithola nami lo msebenzi futhi ngifuna ukushintsha isimo ekhaya. Siyishumi ekhaya akekho umuntu osebenzayo, siphila ngemali yesibonelelo sikaHulumeni.”
UNks uZamanje Ndondo waseThokazi, kwaNongoma ulijabulele naye leli thuba wathi ubesehlale isikhathi eside engasebenzi.
UNongoma uthi awukakiswe inkohlakalo kodwa...